बन्धक बनाएर बलात्कार: आरोपितले स्विकारिसके, उजुरी दिन उमेर पुगेन - Ganatantra Online
भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञ, यात्रा ब्लॉगर प्रतिद्वंद्वी मैक्सिकन गिरोहों…
दाङमा दुर्घटना हुँदा ८ जना घाइते
गुल्मीमा एक महिलाको शव फेला
गणतन्त्र अनलाइन १६ फाल्गुन २०७७, आइतवार
विराटनगर, फागुन १६। आमा–बाबु दुवै अर्काअर्कैसँग बिहे गरेर हिँडे। अलपत्र छोरी गुजाराको संघर्षमा थिइन्। कामको प्रलोभन दिँदै एक जनाले डेरामा लगे। बन्धक बनाएर केही दिन बलात्कार गरे। मुस्किलले फुत्किएकी १५ वर्षीया बालिका चिनेजानेकाको शरणमा पुगिन्। तिनकै सहयोगले आरोपित समातिए।आरोपितले बलात्कार स्विकारिसके। बालिका प्रहरी संरक्षणमा छिन्। तर, एउटा कानुनी जटिलता आएको छ– आँखैअगाडिको बलात्कारीबारे किटानी जाहेरी कसले दिने? आफन्त को छन्, कहाँ छन्? पीडितलाई थाहा छैन। स्वयं उनका लागि उजुरी दिन कानुनले रोक्छ। किनकि, उनको उमेर पुगेकै छैन।बालिकामाथि बलात्कार हुन सक्छ। तर, कानुनले तिनलाई स्वयं उजुरी गर्न रोक्दो रहेछ। पीडित मात्र होइन, प्रहरी पनि यही जटिलताले रनभुल्लमा छ।
मोरङको उर्लाबारी–५ घर बताउने बालिकालाई बुवा–आमा कहाँ छन् भन्ने पत्तो छैन। आमाबुवा दुवै जनाले अर्कै बिहे गरेको भन्ने सुनेकी छन्। आठ वर्षको उमेरदेखि नै अभिभावकविहीन बनेकी उनलाई आफन्तको साथसमेत मिलेन। भोक लाग्दा चिनजानकासँग मागेर खानु उनको बाध्यता बन्यो। उनी माघमा काम खोज्दै सुनसरीको इटहरी आउँदा ४९ वर्षीय रोहित कार्कीसँग भेट भयो। कार्की इटहरीमा सार्वजनिक यातायातलाई यात्रु खोजिदिने, त्यसबापत कमिसन लिने काम गर्थे।
ती बालिकाले आफ्नो समस्या कार्कीलाई सुनाइन्। कार्कीले काम खोजिदिने आश्वासन दिएपछि उनी आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिई उर्लाबारीतिरै फर्किन्। कार्कीले काम पाइएको भन्दै एक साताअघि बोलाएर इटहरी उपमहानगरपालिका–५ स्थित एउटा घरमा पुर्‍याए। तर, त्यहाँ राखेर कार्कीले बालिकालाई मानसिक तथा शारीरिक यातना दिँदै बलात्कार गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीको टोलीले आरोपित कार्कीलाई मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित विराट चोकबाट पक्राउ गरेको छ।
प्रहरी निरीक्षक ऋषिराज ढकालले पीडितलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थामा उद्धार गरिएको बताउनुभयो। बेलबारीमा कार्यरत महिला प्रहरीले ‘काउन्सिलिङ’ गर्दै अवस्थालाई सामान्य बनाएपछि पीडितले केही सहज महसुस गरेको जनाइएको छ। त्यसपछि बलात्कार घटनाबारे बताएकी थिइन्। ढकालका अनुसार राम्रो कमाइ हुने काममा लगाइदिने आवश्वासन दिँदै कार्कीले एक सातासम्म बलात्कार गरेको खुलेको छ।
घटना इटहरीमा भएकाले आरोपितलाई बेलबारी प्रहरीले शुक्रबार साँझ इलाका प्रहरी इटहरीको जिम्मा लगाएको छ। बलात्कार गर्न खोज्दा असहमति जनाए मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको खुलेको इटहरीका डीएसपी अर्जुन केसीले बताउनुभयो। पीडितलाई संरक्षण र आवश्यक ‘काउन्सिलिङ’का लागि ‘माया घर’को जिम्मा लगाइएको डीएसपी केसीको भनाइ छ।
प्रहरीले कार्कीविरुद्ध अपहरण र शरीर बन्धक तथा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सकिने जनाएको छ। तर, पीडितका आफन्त सम्पर्कमा नआएकाले समस्या देखिएको छ। ‘पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन आफन्तको खोजी भइरहेको छ’, डीएसपी केसीले भन्नुभयो, ‘तर कोही पनि सम्पर्कमा आइसकेका छैनन्।’
उहाँले बालिका पीडित भएका कारण अभिभावक वा कोही आफन्तले जाहेरी नदिए बलात्कारमा संलग्नविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन कानुनी जटिलता रहने बताउनभयो। ‘पीडित बालिका भएकाले पीडकविरुद्ध उनले जाहेरी दिन मिल्दैन’, केसीले भन्नुभयो, ‘फेला पर्नासाथ बोलाएर आफन्तलाई ल्याइनेछ। सहयोग गर्न तयार नदेखिए उनीहरूमाथि नै कारबाही हुन्छ।’ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ।